Haintrano tetsy Behoririka: magazay maro tao amin’ny Galerie Mialy kila forehitra | NewsMada
Mbola tsy fantatra ny antony nahatonga ny loza fa raha ny re teny an-toerana, vokatry ny ”court-circuit” ny nampirehitra ny Galerie Mialy, etsy Behoririka, omaly hariva. Kila forehitra ireo magazay maro sy ireo entam-barotra tao amin’ity galerie ity.
Fatiantoka iray lavaka ny an’ireo tompona magazay ao amin’ny Galerie Mialy amin’izao ankatoky ny fetin’ny Krismasy sy ny faran’ny taona izao. Levon’ny afo tao anatin’ny indray mipimaso ny entana mitentina antapitrisany maro. Naharitra teo amin’ny ora iray mahery teo ho eo ny namonoan’ny mpamonjy voina ny afo nandoro ny Galerie Mialy eny Behoririka. Nijoalajoala ny afo narahina setroka maintibe. Nipoapoaka ireo taribin-jiro mitondra herinaratra tao an-trano, nisavoritaka ny olona, samy niolomay nanavotra ny entany. Santionany amin’ny zava-nitranga teny Behoririka, nandritra ity fahamaizana trano ity, izany. Araka ny fanazavan’ny renim-pianakaviana iray manana fivarotana ao amin’ity Galerie Mialy ity, nanomboka tamin’ny 6 ora hariva ny firehetana izay tsy fantatra mazava ny antony nampirehitra ny trano. Tao amin’ny rihana faharoa sy fahateo no nahitana ny fiantombohan’ny afo ka niitatra tamin’ireo efitra manodidina ao an-trano. “Nisy zavatra nipoaka mafibe avy ao amin’io galerie io narahina afobe ka nampitsoaka avy hatrany ny olona tety amin’ny manodidina”, hoy ny fanazavan’ny mpivarotra amoron-dalana iray. Fotoana fohy taorian’ny firehetana, tonga haingana teny an-toerana nanao ny asam-pamonjena tamin’ny famonoana ny afo ny mpamonjy voina. Nanampy azy ireo ihany koa ny polisy tamin’ny fandaminana ireo olona marobe nifamezivezy teny amin’ny manodidina ity trano may ity. Nambaran’ny eo anivon’ny sampana mpamonjy voina fa fipoahana herinaratra ny nahatonga ity loza ity.
Tsy manaraka ny fenitra ny trano fivarotana eo Behoririka…
Malagasy avokoa ny mivarotra sy tompon’ity galerie ity ary misy efitrakely toeram-pivarotana maromaro ao amin’ity magazay ity izay Malagasy ihany koa ny mivarotra amin’izy ireo. Tapitra kila hotohoton’ny afo avokoa ny ankamaroan’ireo entana mitentina antapitrisany tao amin’ity toeram-pivarotana ity. Niteraka fifanjevoana teo amin’ireo mpivarotra eo amin’ny manodidina izany satria nanararaotra nitaona ny entany avokoa ny ankamaroan’ireo mpivarotra sasany teny an-toerana noho ny tahotra amin’ny mety ho fiitaran’ny afo. Tsikaritra fa tsy manaraka ny fenitra takin’ny asa fanorenan-trano avokoa ny ankamaroan’ireo toeram-pivarotana eny Behoririka. Efa nisy trangana haintrano toy izao koa mifanakaiky tao amin’ny toeram-pivarotana tsy lavitra ity Galerie Mialy ity.
Efa nisy fotoana nandraisan’ny kaominina fepetra tamin’ny fanakatonana ireo toeram-pivarotana sasany teo Behoririka satria tsy manaraka ny fenitra mifehy ny fanorenan-trano, toy ny tsy fisian’ny lalana fivoahana raha misy loza tampoka toy izao. Samy manao izay tiany hatao satria manjaka ny lalana ambanin’ny tany sy ireo lava tananan’akanjo, hany ka jerem-potsiny ny fanorenana tsy ara-dalàna. Rehefa tonga anefa ny loza vao mifanome tsiny sy mifanilika andraikitra ny tsirairay. Tokony hojeren’ny tompon’andraikitra akaiky, araka izany, itony fanorenan-trano tsy ara-dalàna, indrindra fa ny toeram-pivarotana eto an-dRenivohitra itony. Tsy nisy kosa anefa ny naratra na namoy ny ainy tamin’ity haintrano ity.